Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ụlọ ahịa nke China Economic Overhead Shower - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Isi ịsa ahụ > Onye isi ịsa ahụ n'elu > Onye isi ịsa ahụ n'elu akụ
Onye isi ịsa ahụ n'elu akụ
Ejiri isi plastik na chrome ọhụrụ mee Isi ụlọ ịsa ahụ nke akụ na ụba. Ọ bụ ezie na ọ bụ isi mmiri ịsa ahụ na-arụ otu ọrụ, e nwere ụzọ abụọ dị iche iche esi agbapụta mmiri. Ihe dị n'ime ime ụlọ ịsa ahụ dị n'elu dị ntakịrị, ebe n'èzí dị ntakịrị. Mgbe ị na-asa ahụ, ọ ga-ewetara gị mmetụta dị iche.
China N'ogbe Economic Overhead ịsa isi Price
Anyị na-ebunye isi ụlọ ịsa ahụ nke akụ na ụba nwere udi conical, nnukwu mmiri na-acha anụnụ anụnụ, isi awọ na elu chrome-plated. Ọ na-ewu ewu nke ukwuu n'ahịa Middle East, na ọnụ ala dị ala na ezigbo mma. Oge ikike ya bụ afọ 2, na ndụ ọrụ karịrị afọ 5.
Economic overhead ịsa isi
Ọrụ 1: Spray ịsa ahụ
Brass / igwe anaghị agba nchara / Plastic
Isi ụlọ ịsa ahụ nke akụ na ụba dabara adaba maka ndị nwere obere mmefu ego, ụmụ akwụkwọ mba ụwa, ezinaụlọ nkịtị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ọnụ ala. Isi ụlọ ịsa ahụ nke akụ na ụba nwere ndụ ọrụ karịa afọ 5.
Ndị a bụ foto zuru ezu nke isi ụlọ ịsa ahụ Economic.
Anyị nwere akwụkwọ maka ịsa ahụ n'elu.
Banyere isi ụlọ ịsa ahụ nke akụ na ụba a, oge nnyefe anyị bụ ihe dịka ụbọchị 30 ruo 45.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Onye isi ịsa ahụ n'elu akụ na ụba, ndị nrụpụta, N'ogbe, China, ọnụ ahịa, ụlọ ọrụ, ndị na-ebunye ya
Oke ịsa ahụ dị n'elu
Akụ na ụba gburugburu isi ịsa ahụ
Ịsa ahụ n'elu eletrọnịkị gburugburu